Burkina Faso Weeraro ka dhacay Oo Lagu Dilay Daraasiin
Dowladda halgan kula jirta sidii ay uu xakamey laheyd fallaagada dilaaga ah ee ku sii faafaysa waddanka dhaca galbeedka Afrika, waqooyiga ilaa bari.
Burkina Faso – Ouagadougou- Ugu yaraan 29 qof ayaa lagu dilay weerarro. Kala duwan oo ka dhacay waqooyiga Burkina Faso ee ay dhibaatadu sameysay. Ka dib markii kolonyo gargaar siday iyo gaari xamuul ah la weerarey.
Mid ka mid ah gaadiidka oo xamuul iyo dad ganacsataddii laheyd alaabada siday “ayaa dul fuulay miino dhulka lagu aasay ee loo yaqaan afka qalad (IED). Aagga Barsalogho”.
Halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 rakaab ah. Afhayeenka xukuumadda Remis Fulgance Dandjinou ayaa sidaa ku sheegay hadal uu soo saaray. Inta badan dadka dhintay Axadii waxaay ahaayeen ganacsato.
Dhanka kale. Meel Qiyaastii 50km u jirta isla goobta masiibadu ka dhacay. Ayaa sidoo kale waxaa lagu dilaay 14 qof. Kadib markii kolonyo gaadiid xamuul ah oo raashin u siday dadka ku barakacay dagaalada oo halkaas lagu weeraray.
“Riwaayaddani ka socoto dalkaas waxay ku soo beegmaysaa xilli dadaallo nabadgelyo oo muhiim ah laga wado gobolkaan,” ayuu yiri sarkaal militariga ah. “Cidaamo xoojin nabad gelyadda ayaa la geeyay aaga.”
Aagga weerarkii labaad todobaadkii hore uu ka dhacay oo ah magaalada Kaya. Ayey Saxafaddu Boqatey waxaayna la hadashay Dadka degaanka oo yirii.
“Waaan ognahay xiisada iyo cabsida jirta. Xaqiiqdii, waxaan jiraa dad isku diyaarinaya inay ka guraan magaladda sababta oo ah waxaay war heleen weeraro ka dhacay tuulooyin badan oo ku dhow,” ayay tiri.
“Xaaladda waay ka sii dareysa mar kasto oo aad waqooyiga aad u sii dhaqaqdid. Dowladdu waxaay ciidamo u dirtay aaggan. Waxay ka qabteen hawlgallo. Laakiin way la balaaratey sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa ma aha dhul yaree ee waa dhul ballaaran.”
Burkina Faso. Oo ka mid ah waddamada ugu saboolsan adduunka. Ayaa Dgaal kula jirta jabhado hubeysan tan iyo sanadkii 2015.
Ciidamada Galbeedka Afrika ayaa si aad ah u bartilmaameedsanaayey falaagada.
Horraantii bishaan. Weerar lagu qaaday saldhig militari oo ku yaal waqooyiga Burkina Faso waxaa lagu dilay 24 askari.
Rabshadahan Oo asal ahaan ka soo bilaabmey markoodi hore dalka deriska la ah ee Mali , ayaa ka bilaabmay waqooyiga halkaas oo markii dambe ay uu sii gudbeen oo ay ku faafeen dhinaca bari dalka.
Magaalada caasimada ah. Ouagadougou. Waxaa la weeraray seddex jeer. Marka lagu daro weerarkii bishii Maarso 2018 lagu qaaday xarunta millatariga taas oo ay ku dhinteen sideed qof.
Shir madaxeedka dowlad goboleedyada ayaa lagu wadaa in Sabtida lagu qabto magaalada Ouagadougou. Si looga wada hadlo xaaladda amniga.
Rabshadaha ka socda Burkina Faso ayaa ku qasbay ku dhawaad ​​300,000 oo qof inay ka cararaan guryahooda isla markaana ay ka hor istaagto nus malyuun helitaanka daryeel caafimaad. Qaramada Midoobey iyo Laanqayrta Cas ayaa sidaas sheegay Isniintii.
“Ku dhawaad ​​289,000 oo barokacayaal ah ayaa ku nool teen dhooyin loo dhisaay,” Xafiiska Qaramada Midoobay ee Isuduwidda Arrimaha Bani’aadamnimada ayaa war-murtiyeed ka soo baxaay sidaa ku sheegay, iyadoo intaas ku dartay tirada barakacayaasha inay saddex laab ka badan tahay sanadkan 82,000 laga soo bilaabo bishii Janaayo.
Guddiga Caalamiga ee Laanqeyrta Cas (ICRC) ayaa qoraal gaar ah oo uu ka soo saaray arrintan ayuu ku sheegay in “500,000 oo qof ay la yihiin daryeel caafimaad tan iyo bishii Janaayo taas oo sabab uu ah rabshadaha jihaadka”.
“Walwalka ugu weyn ee aynu Qabno waa Macaluul iyo nafaqo-xumo.Iyada oo 1.2 milyan oo qof ay wajahayaan cunno yari,” ICRC ayaa tiri sidaas.
Waxay gargaar cunto gaarsiisay 22,000 oo barakacayaal ah iyo gargaar caafimaad oo ay siisay 21,000 qof lixdii bilood ee ugu horeysay sanadkan, ayay raacisay.